Walker's Neuk - Ground Floor Garden Apartment - I-Airbnb
Walker's Neuk - Ground Floor Garden Apartment
Fife, Scotland, i-United Kingdom
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sam
U-Sam Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lengadi ye-Ground Floor izinyathelo ezimbalwa ukusuka ogwini.
Umbhede ongu-1, indawo yokuphumula enezinto zokubasa izinkuni, ikhishi, indawo yokugeza, ingadi emazingeni ama-2 anokubukwa kolwandle.
I-Walker's Neuk iyifulethi elihlelwe kahle elitholakala enhliziyweni yedolobhana elihle lokudoba lase-Anstruther. Ifulethi eliphansi elinengadi enelanga, elisentshonalanga kumaleveli amabili, okwabelwana ngalo nefulethi eliphezulu. Izinga lesibili linikeza ukubukwa kolwandle kweBass Rock kanye neFirth of Forth ngaseNyakatho Berwick. Ingadi enokuthula inobufakazi bezinkundla zokucobelelana ngolwazi zezindela zaseBalmerino ezahlaliswa esizeni ngekhulu le-13. I-Walker's Neuk yakhiwa ngekhulu le-18 futhi yayisetshenziselwa ukuhlala i-Blacksmith yendawo.
Indawo yokuhlala inehholo lokungena elinesitebhisi elingena egumbini lokuhlala elibanzi / lokudlela elinesitofu esivuthayo, ikhishi elihlome kahle elinebha yasekuseni eqoshiwe yokhuni. Igumbi lokulala elibanzi elibanzi linombhede we-zip/link ongu-6ft (imibhede engamawele uma kudingeka) onombhede wezivakashi owengeziwe. Ibhavu neshawa yokugeza ngokweqile enethoyilethi. Ukuzijabulisa kohlelo lokusebenza lwe-Wi-Fi ne-TV kufakiwe.
4.81 out of 5 stars from 47 reviews
4.81 · 47 okushiwo abanye
Indawo ekahle yezivakashi ezivakashela e-East Neuk of Fife, ikotishi libekwe phakathi kwemigwaqo emincane yase-Anstruther, elihle kakhulu lokuhlola idolobhana kanye netheku lokusebenza eliseduze. Itholakala maqondana nendawo yokudlela enezinkanyezi ze-Michelin, i-The Cellar futhi iyizinyathelo ezimbalwa ukusuka ogwini lapho uzothola khona imiklomelo yezinhlanzi nama-chip shops, izindawo zokudlela, amakhefi, amabha kanye nohlu lwezitolo zasendaweni.
Ungakwazi ukujabulela ukuhamba ngezinyawo eduze kwe-Fife Coastal Path enqamula idolobhana bese emva kwalokho, uphumule engadini noma endaweni yokuphumula enethezekile eduze kwesitofu sezinkuni. I-Walker’s Neuk iyisisekelo esikahle sokuvakashela iminyuziyamu, izinqaba zomlando, izingadi ezinhle kanye nokuhlola amadolobhana amahle ase-East Neuk kanye nezwe elingasogwini. Uhambo lwesikebhe oluya e-Isle of May Bird Sanctuary ne-Observatory edume umhlaba wonke nalo lusuka e-Anstruther.
Le ndawo idume ngezifundo zegalofu ezinokukhethwa okuhle kwezifundo zezixhumanisi ezisezingeni eliphezulu endaweni ezungezile. I-Anstruther iwuhambo lwemizuzu eyi-15 - 20 ukuya e-St Andrews kanye nezifundo zayo ezisezingeni lomhlaba zoMqhudelwano, i-Edinburgh, iPerth, iStirling neGleneagles konke kungakapheli ihora lokushayela.
We love the coast and country-side in Scotland, West Coast and East Coast! Walking and outdoor pursuits are a passion together with good eating, music and film.
USam Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$123.
Hlola ezinye izinketho ezise- Fife namaphethelo